Xog: Alshabaab oo gowracay darawal Kenyan ah – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Xog: Alshabaab oo gowracay darawal Kenyan ah
23rd August 2014 A warsame Af Soomaali 0
Mareeg.com: Gudoomiyaha Jaziirada Lamu, ee gobolka Xeebta Kenya, Njenga Miiri ayaa sheegay AlShabab gowraceen darawal Kenyan ah oo ay kasoo afduubteen deegaanka Kiunga oo ku dhirirsan xuduudka Somalia iyo Kenya.
Meydka George Mwita ayaa lahelay xili ay ciidamada xooga Kenya iyo kuwa Boolisku kuguda jireen howlgal darawalkaasi lagu soo badbaadinayey keyn kutaala dalka Somalia oo ay Al-shabab ninkani ku qarinayeen.
Gudoomiyaha Jaziirada Lamu Njenga Miiri ayaa xaqiijiyay inuu dhacay howlgalkaasi balse uusan ku dhamaanin qaabkii loo baahnaa, madama uu socday roob culus xiliga howlgalka.
“Waa nasiib daro inaan badbaadin weyno ruux Kenyan ah, balse iyaga waan ugaarsan doonaa” Miiri ayaa sidaa yiri.
Booliska Kenya ayaa xaqiijiyay in Al-Shabab ay soo daayeen labo Kenyan Muslimiin ah oo la socotay darawalka Ladilay iyagoo wax yeelo aan gaarsiinin. Alshabaab weli kama hadlim gowraca la sheegay iney u geysteen darawal Kenyan ah oo Kiristan ahaa.
Dowlada Kenya ayaa ku dhawaaqday in ciidamadeyda ay amartay iney galaan Somalia sanadkii 2011 kadib markii ay sheegtay in ay Al-Shabab kala kulantay dhibaatooyin xoog leh.
Booliska Kenay oo sheegay in Xasan Xanafi qirtay magiciisa saxda ah
Akhri: Imaaraadka Carabta oo rabta hanashada maskaxda Ilaalada Villa Somalia